EX - ABSDF: အမှုမှန် ပေါ်ပေါက်လာစေကြောင်း
(မြန်မာနိုင်ငံမှာ အင်မတန်မှ ထူးခြားဆန်းကြယ်တဲ့ မှုခင်းဖြစ်ပွားရာ နေရာ ဆန်းစစ်ချက်တွေ ပေါ်ထွက်လာတတ်ပါတယ်။ မဟုတ်ပဲ ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေပါတဲ့ ဆန်းစစ်ချက်တွေပါ။ ဥပမာအားဖြင့် ဒီကနေ့ ပေါ်ထွက်လာတဲ့ ကောင်းခါးမှုခင်း ဆန်းစစ်ချက် စာမှာ စစ်ဖိနပ်ရာ မဟုတ်ပဲ၊ aerosoft ဖိနပ်ရာ ဆိုတဲ့ စာလုံးတွေနဲ့ အလားတူ (မဟုတ်ပဲ......) အခြေပြုစကားလုံးတွေ တော်တော်များများ တွေ့ရပါတယ်။ ဘာလို့ တွေ့ရှိချက်ကို တွေ့ရှိချက်လို မရေးပဲ၊ တစုံတရာကို အကာအကွယ်ပြုစကားလုံးသဘော သက်ရောက်တဲ့ စကားလုံးတွေ ပါဝင်နေရသလဲ။ စွပ်စွဲမှုတွေ၊ သံသယတွေ ကိစ္စ မပြောလိုပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီထက်ပိုပြီး၊ ယုတ္တိတန်ဖို့တော့ လိုလေမလားပဲ။ မရေရာမှုတွေ များလာရင်တော့ နိုင်ငံတကာ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များကို အကူအညီတောင်းတာ ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ stakeholder ပေါင်းစုံ ပါဝင်တဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် တောင်းဆိုကြဖို့ လိုပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူဟု သံသယဖြစ်ခံရသူများကိုတောင် အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ ဥပဒေပြုရေးက အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေး၊ မှားယွင်းစွပ်စွဲခံရမှုများ ပပျောက်ရေး စတာတွေအတွက် ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သေးတာပဲ။
မြန်မာ့မြေမှာ ဖြစ်သွားတဲ့ ကိစ္စမှာ အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေး၊ မှားယွင်းစွပ်စွဲခံရမှုများ ပပျောက်ရေးအတွက်လဲ ထိထိမိမိ ပါဝင်ပတ်သက်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီကိစ္စဟာ မြန်မာ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ စွမ်းရည်တွေကို ကမ္ဘာသိ စိန်ခေါ်ချက် ဖြစ်ပါတယ်။ High Profile Case ဖြစ်တဲ့အတွက် အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးမှာ ရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ Interpol ကို နည်းပညာနဲ့ အကြံဥာဏ် အကူအညီ တောင်းခံလို့ရနိုင်ပါတယ်။ ပြစ်မှုအမှန်တကယ်ကျူးလွန်သူသာ ပြစ်ဒဏ်ခံရရေး၊ ပြစ်မှုမကျူးလွန်သူကို spacegoat အသုံးပြုမှု မရှိစေရေး၊ ပြစ်မှုကျူလွန်သူကို အကာအကွယ်မပေးရေး စတဲ့ အချက်တွေဟာ ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်များဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီကျင့်ဝတ်များကို မချိုးဖောက်သော အမှုမှန် ပေါ်ပေါက်လာစေကြောင်း ဆုတောင်းမိပါရဲ့)
ခင်မမမျိုး (၂၄၊ ၁၊ ၂၀၁၅)
Crime Scene Investigation (မှုခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာ ဆန်းစစ်ချက်) အကြောင်း သိကောင်းစရာ
မှုခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာလေ့လာဆန်းစစ်ချက်များပြုလုပ်ရာမှာ ရှာဖွေခြင်း၊မှတ်တမ်းပြုစုခြင်း၊ သက်သေခံအထောက်အထားများကို ခြေရာလက်ရာမပျက်အောင် ထိန်းသိမ်းခြင်းစတာတွေ ပြုလုပ်ရတဲ့အတွက်မှုခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာလေ့လာဆန်းစစ်ချက် ဆိုတာကိုဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်နဲ့စနစ်တကျ ပြုလုပ်ရတဲ့ဖြစ်စဉ်တရပ်အဖြစ် မှုခင်းပညာရှင်များကဆိုလေ့ရှိကြပါတယ်။ ကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးနဲ့ စနစ်တကျစုဖွဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်မှုဟာမှုခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာဆန်းစစ်ချက်ရဲ့ အရည်အသွေးကိုဖော်ပြပေးပါတယ်။
မှုခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာတွေကိုအကြမ်းဖျဉ်းအားဖြင့် primaryscene နဲ့secondary sceneဆိုပြီးနှစ်မျိုး ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ primary sceneဆိုတာကလူသေအလောင်း (သို့မဟုတ်)သားကောင်ကိုတွေ့ရှိတဲ့ နေရာ ဖြစ်ပါတယ်။Secondary sceneဆိုရာမှာတော့မှုခင်းကျူးလွန်ခံရတဲ့သားကောင်ရဲ့ နေအိမ်၊သံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိသောမှုခင်းကျူးလွန်သူရဲ့ နေအိမ်၊ကား၊ ဆိုင်ကယ်စသည်များနဲ့အခြားဆက်စပ် အတွင်းအပြင်နေရာများပါဝင်ပါတယ်။ secondaryscenes အများစုကိုအသေးအမွှားများကအစ သက်သေအထောက်အထားရှာဖွေရတဲ့ အသေးစိတ်ရှုထောင့်နဲ့ရှုမြင်စရာ မလိုအပ်ပါဘူး။နေရာဒေသ အခြေအနေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ဖို့ပဲလိုအပ်ပါတယ်။ မှုခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ထပ်မံစဉ်းစားသင့်တဲ့ အချက်တချက်ကတော့ဖြစ်ပွားရာနေရာရဲ့ လူအများလှုပ်ရှားမှု အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုအခြေအနေတွေပေါ်မှာ မူတည်ပြီး၊မှုခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာကိုကာကွယ်တဲ့ အကာအရံ၊ အတားအဆီးတွေ (boundaries of acrime scene) သတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အချို့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကတော့ ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ငယ်များဖွဲ့စည်းပြီး၊ သတ်မှတ်လေ့ရှိကြပေမယ့်ရဲတပ်ဖွဲ့အများစုကတော့အတွင်းစည်း၊ အပြင်စည်းတွေခွဲခြားသတ်မှတ်လေ့ရှိပါတယ်။အတွင်းစည်းကတော့ မှုခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာဖြစ်ပြီး၊ အပြင်စည်းကတော့ဝင်ပေါက်၊ ထွက်ပေါက်ဖြစ်နိုင်သောနေရာများနဲ့ သဲလွန်စ (ဥပမာ-ကျည်ဆန်ခွံရှိနိုင်သောနေရာ)တွေ့နိုင်သောနေရာများ ပါဝင်တဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ပါ တယ်။သံသယဖြစ်ဖွယ် မှုခင်းကျူးလွန်သူကထွက်ပြေးသွားနိုင်ချေရှိတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကို တွက်ဆနိုင်ခဲ့ရင်တော့ တိုးချဲ့စည်းထပ်မံသတ်မှတ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
မှုခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာကိုလေ့လာဆန်းစစ်ချက်များပြုလုပ်မှုဟာ အခြေအနေနဲ့အချိန်အခါတွေပေါ်မှာ မူတည်ပြီး၊ယုတ္တိဗေဒ အမှီသဟဲပြု လုပ်ဆောင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် စံနှုန်းတွေချမှတ်ဖို့ခဲယဉ်းလှပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အသုံးပြုလေ့ရှိတဲ့အခြေခံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကတော့တူညီပါတယ်။ အသုံးများတဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ပုံစံတခုကတော့မေးမြန်းစုံစမ်းခြင်း၊ဆန်းစစ်ခြင်း၊ ဓာတ်ပုံရိုက်ယူခြင်း၊ပုံကြမ်း ရေးဆွဲခြင်းနဲ့သဲလွန်စများ ရှာဖွေခြင်းစသော အဆင့်ငါးဆင့်ပါတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။အဆင့်တိုင်းမှာ ရေးသားမှတ်တမ်းတင်ခြင်းပြုလုပ်ထားသင့်ပါတယ်။
နောက်ထပ်ပုံသဏ္ဍာန်တခုမှာတော့အဆင့် (၁၇)ဆင့်ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီအဆင့်တွေကတော့မှုခင်းဖြစ်ပွားကြောင်းသတင်းရရှိခြင်း၊ အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာသို့သွားရောက်မယ့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအားအကြောင်းကြား စေလွှတ်ခြင်း၊ကနဦး ဆန်းစစ်ချက်များပြုလုပ်ခြင်း၊ ဒဏ်ရာရသူများနဲ့သေဆုံးမှုများနဲ့ ပတ်သက်ပြီးအရေးပေါ် လိုအပ်သည်များဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာအားဓာတ်ပုံများ ရိုက်ယူခြင်း၊မှတ်တမ်းများယူခြင်း၊အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာပုံကြမ်းဆွဲခြင်း၊အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာအားပထမအကြိမ် ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်း၊အလောင်းနဲ့ ဒဏ်ရာရသူများအားဆေးရုံ (သို့မဟုတ်)လိုအပ်သောနေရာသို့ပို့ဆောင်ခွင့်ပြုခြင်း၊သဲလွန်စများ ရှာဖွေခြင်း၊အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာအားဒုတိယအကြိမ် ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်း၊တတိယအကြိမ် ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်း၊အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာအနီးတ၀ိုက်အား စစ်ဆေးခြင်း၊စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ငယ်အားon-site debriefingပေးခြင်း၊မှုခင်းဖြစ်ပွားရာ နေရာမှထွက်ခွာခြင်း (သို့မဟုတ်)သင့်လျော်သောအစောင့်အရှောက်ထားခဲ့ခြင်း၊သက်သေအထောက်အထားများအားသိမ်းဆည်းထုပ်ပိုးခြင်းနဲ့formal debriefingပြုလုပ်ခြင်းစတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများရယူမှုကိုမှုခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှာသဲလွန်စတွေ မပျောက်ပျက်သေးခင်အချိန်မှာ ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများရယူရမှာ အသုံးပြုတဲ့ ကင်မရာမှာ၎ megapixelsအနည်းဆုံးရှိတဲ့ပါတယ်။ pixelsများလေလေ၊အသေးစိတ်ကို မှတ်တမ်းရယူနိုင်မှုများလေပါပဲ။တရားရုံးမှာ သက်သေခံအထောက်အထားတင်ပြရာမှာလဲ ဒါက အရေးကြီးပါတယ်။၄ megapixels နဲ့ရိုက်ယူထားခဲ့ရင် ဓာတ်ပုံကိုပရင်တာနဲ့ ထုတ်ယူရာမှာ 11"x14"ဓာတ်ပုံကောင်းကောင်းကိုထုတ်ယူနိုင် ပြီး၊ ၅ megpixelsနဲ့ဆိုရင်တော့ 16"x20"ဓာတ်ပုံကောင်းကောင်းကိုထုတ်ယူနိုင်တဲ့အတွက် တရားရုံးမှာတင်ပြဖို့ ပိုပြီး အဆင်ပြေစေပါတယ်။
ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများရယူရာမှာအမျိုးအစား (၃)မျိုးရှိပါတယ်။ ပထမတမျိုးက overviewပုံဖြစ်ပြီး၊ဒုတိယတမျိုးကတော့ mid-rangeပုံဖြစ်ပါတယ်။တတိယတမျိုးကတော့ close-upပုံဖြစ်ပါတယ်။overview (localeand approach route) ပုံတွေနဲ့mid-range (၁၀-၂၀ပေ) ပုံတွေကမှုခင်းကျူးလွန်သူရဲ့ modusoperandi ကိုသဲလွန်စပေးနိုင်ပြီး၊ Close-upရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေ ကတော့ မှုခင်းကျူးလွန်မှုရဲ့corpus delictiကိုဖော်ပြပေးနိုင်ပါတယ်။လူသတ်မှု (သို့မဟုတ်)လူသေမှုတွေကိုဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းရယူရာမှာတော့ဦးခေါင်းမှ ခြေထောက်၊ခြေထောက်မှ ဦးခေါင်း၊ ညာဘက်၊ဗယ်ဘက်နဲ့ အထက်စီး စတဲ့ရှုထောင့် (၅)ခုကနေဓာတ်ပုံ (၅)ပုံရိုက်ယူသင့်ပါတယ်။
မှုခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာကိုဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများရယူပြီးချိန်မှာ၊အခင်းဖြစ်ပွားမှုဆိုင်ရာပုံကြမ်းများ ရေးဆွဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ပုံကြမ်းများရေးဆွဲရာမှာ အတိုင်းအတာများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့ လိုသလို၊သက်သေခံ အထောက်အထားများကိုလဲအလံ (သို့မဟုတ်)နံပါတ်စာရင်းစဉ်များသတ်မှတ်ပြီး ရေးဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့်ပုံကြမ်းနဲ့ စတင်လေ့ရှိပြီး၊နောက်ပိုင်းကျမှ စကေးသတ်မှတ်ပြီးအချောသတ် ရေးဆွဲလေ့ရှိကြပါတယ်။ ပုံကြမ်းများမှာ OverheadSketch (ကောင်းကင်မှရိုက်ကူးထားသော ဓာတ်ပုံသဏ္ဍာန်ကဲ့သို့ရေးဆွဲထားခြင်း)၊Exploded ViewSketch ၊ Elevation Sketch(ဘေးတိုင်အမြင်မှရေးဆွဲခြင်း)နဲ့Perspective Sketch(တတိယဒိုင်မင်းရှင်း ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း) ဆိုပြီးပုံကြမ်းအမျိုးအစားလေးမျိုးရှိပါတယ်။
မှုခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှာရှာဖွေရေးပြုလုပ်ရခြင်းရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဟာမှုခင်းကျူးလွန်ခံရသူနဲ့မှုခင်းကျူးလွန်သူတို့နဲ့ဆက်စပ်နိုင်ချေဖွယ်ရာရှိတဲ့သဲလွန်စအထောက်အထားများကိုရှာဖွေတာ ဖြစ်ပါတယ်။များသောအားဖြင့် ၀င်လမ်း၊ထွက်လမ်းတွေကနေ စတင်ရှာဖွေလေ့ရှိကြပါတယ်။ မှုခင်းဖြစ်ပွားမှုမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ လက်နက်ကိရိယာများကိုဒီလမ်းကြောင်းတလျှောက်မှာစွန့်ပစ်တတ်လေ့ ရှိတတ်တဲ့အတွက်သဲလွန်စများရနိုင်တဲ့ နေရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုရှာဖွေရာမှာကိုယ်တိုင်မှုခင်းကျူးလွန်သူဖြစ်ခဲ့ရင် ဘယ်လိုလုပ်နိုင်ချေရှိမလဲဆိုတာကို စဉ်းစားပြီး၊ရှာဖွေရေး ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ပိုပြီး ထိရောက်နိုင်ပါတယ်။ရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့ ပစ္စည်းများကိုစနစ်တကျ အမှတ်စဉ်တပ်ပြီးသိမ်းဆည်းရေး လုပ်သင့်ပါတယ်။
မှုခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး မှတ်တမ်းတင်တဲ့အခါမှုခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဖော်ပြချက်များ(ဥပမာ-ကျည်ဆံပေါက်များ၊ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ထားမှုများစသည်)၊သက်သေခံ အထောက်အထားများအားတွေ့ရှိတဲ့ နေရာများနဲ့မှုခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှာတွေ့ရှိရသူများ စတာတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသင့်ပါတယ်။မှတ်တမ်းများကို အစီအစဉ်တကျရေးသားမှတ်တမ်းတင်သင့်ပါတယ်။ သက်သေများနဲ့သံသယဖြစ်ဖွယ်မှုခင်းကျူးလွန်သူများဟာလဲမှုခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှာရှိနေနိုင်တဲ့ အတွက် သူတို့နဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံ ပြောဆိုထားချက်များကိုမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းဖြင့်မှုခင်းဖော်ထုတ်ရေးအတွက်အကျိုးရှိလာနိုင်ပါတယ်။
မှုခင်းပညာရှင် Weston နဲ့Lushbaughဆိုသူတို့ကမှုခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှာတွေ့ရှိရတတ်တဲ့ သက်သေအထောက်အထားခုနစ်မျိူးကို ခွဲခြားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီအမျိုးအစားတွေကတော့လက်နက်များ၊သွေး၊ လက်ဗွေရာများ၊ပစ္စည်းကိရိယာများရဲ့သက်ရောက်မှုများ (ဥပမာ-နံရံပေါ်မှသေနတ်ကျည်ပေါက်)၊အမှိုက်သရိုက်နှင့် ဖုန်များ၊စာရွက်စာတမ်းများနဲ့ရှုပ်ထွေးနက်နဲသော သဲလွန်စများစတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အချို့သက်သေအထောက်အထားများရယူရာမှာ crimelab ရဲ့အကူအညီကို ရယူဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
သက်သေအထောက်အထားများကိုထုပ်ပိုးသိမ်းဆည်းရာမှာလဲစနစ်တကျ ထုပ်ပိုးသိမ်းဆည်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ တူညီတဲ့ပစ္စည်းနှစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ရင်သီးခြားအိတ်ထဲမှာ ထည့်သွင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သွေးစွန်းနေတဲ့အရာဝတ္ထုများကို ကနဦးလေထဲမှာအခြောက်ခံပြီးမှသီးခြားထုပ်ပိုးသိမ်းသင့်ပါတယ်။လောင်ကျွမ်းထားတဲ့ အရာဝတ္ထုများကို airtight containerနဲ့သိမ်းဆည်းသင့်ပါတယ်။
မှုခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာလေ့လာဆန်းစစ်ချက်ရဲ့အဆုံးသတ်ကတော့ အမှုတည်ဆောက်ခြင်း (crime reconstruction) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်သူ၊ ဘာ၊ဘယ်အချိန်၊ ဘယ်နေရာ၊ ဘာကြောင့်ဒီမှုခင်းဖြစ်ပွားရလဲ ဆိုတဲ့အချက်တွေအားလုံးကိုသက်သေအထောက်အထားများ၊မျက်မြင်သက်သေများ၊ အမှုသွားအမှုလာဆန်းစစ်ချက်များ၊ သံသယဖြစ်ဖွယ်မှုခင်းကျူးလွန်သူများရဲ့ထွက်ချက်များ၊ မှတ်တမ်းများကိုစုစည်းပြီး အမှုတည်ဆောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
မှုခင်းဖြစ်ပွားမှုတွေဟာ မှုခင်းကျူးလွန်ခံရသူတွေကိုတင် ထိခိုက်နစ်နာစေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ မှုခင်းရဲ့ အတိမ်အနက်ပေါ်မူတည်ပြီး၊ အများပြည်သူကိုလဲအလန့်တကြား၊ ကျီလန့်စာစားဖြစ်စေမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါတင်မကပဲရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ စွမ်းရည်ကိုလဲ ယုံကြည်မှုတွေ လျော့နည်းလာစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မှုခင်းဖြစ်ပွားမှုများကိုကာကွယ်ရန် ဘက်ပေါင်းစုံကလုပ်ဆောင်ဖို့ လိုအပ်သလို၊မှုခင်းများ ဖြစ်ပွားလာတဲ့အခါမှာလဲကျူးလွန်သူများကို အရေးယူနိုင်ရေးကအလွန်ပဲ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီလို အရေးယူနိုင်ရေးအတွက် မှုခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာလေ့လာဆန်းစစ်ချက်ကလဲ အရေးပါတဲ့ ကဏ္ဍတခုဖြစ်ပါကြောင်းရေးသား တင်ပြအပ်ပါတယ်။
Bennett, W. & Hess, K. (1998)Criminal Investigation, 5thedition, Belmont, CA: Wadsworth.
Byrd, M. (2001). Crime SceneEvidence: A Guide to the Recovery and Collection of PhysicalEvidence. Temecula, CA: Staggs Publishing.
Fisher, B. (2000). Techniques ofCrime Scene Investigation. Boca Raton: CRC Press.
Gardner, R. (2005). PracticalCrime Scene Processing and Investigation. Boca Raton: CRC Press.
McAuliffe, J. (2002). CriminalInvestigations: A Scenario-Based Text. Upper Saddle River, NJ:Prentice Hall.
Sonne, W. (2006). CriminalInvestigation for the Professional Investigator. Boca Raton, FL: CRCPress.
Staggs, S. (1997). The CrimeScene and Evidence Photographer's Guide. Temecula, CA: StaggsPublishing.